Bbq Area Ụlọ Nkeonwe - Imewe Mmewe
Ụlọ Nkeonwe Ihe oru ngo a nke bbq bu oghere n’enye ndi mmadu nri n ’ezi ulo na ijikota ezinulo. Na Chile mpaghara bbq dịkarịsịrị anya na ụlọ mana ọrụ a ọ bụ akụkụ nke ụlọ ijikọ ya na ogige site na iji windo mpịachi buru ibu na-enye ohere ka anwansi nke ubi ahụ gbaba n'ime ụlọ. Oghere anọ ahụ, ọdịdị, ọdọ mmiri, ebe iri nri na nri bụ ndị nwere otu ọpụrụiche.
Aha oru ngo : Bbq Area, Aha ndị na-emepụta ya : Karla Aliaga Mac Dermitt, Aha onye ahịa : karla Aliaga Mac Dermitt.
Ụlọ Nkeonwe Karla Aliaga Mac Dermitt Bbq Area